Joba 2 - Ny Baiboly
Joba toko 2
Joba nozahan-toetra tamin'ny aretina mahatsiravina nahazo ny tenany - Tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy na dia nesoin'ny vavy aza - Ny nahatongavan'ireo sakaizany telo lahy.
1Indray andro, raha tonga teo anatrehan'ny Tompo ireo zanak'Andriamanitra, dia mba tonga teo afovoan'izy ireo koa Satana, ka tonga teo anatrehan'ny Tompo. 2Ary hoy Iaveh tamin'i Satana: Avy aiza hianao? Ka hoy Satana namaly an'ny Tompo: Avy nitety ny tany aho ary nitsangantsangana teny. 3Dia hoy Iaveh tamin'i Satana: Efa nandinika an'i JOba mpanompoko va hianao? Tsy misy olona toa azy eny ambonin'ny tany, marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Maharitra mandrakariva amin'ny fahamarinana izy, na dia notaominao hamery azy tsy ahoan-tsy ahoana aza aho. 4Fa hoy ny navalin'i Satana an'ny Tompo: Hoditra fefin'ny hoditra! Izay ananan'ny olona dia atolony ho fefin'ny ainy avokoa. 5Fa ahinjiro hikasika ny nofo amam-batany ny tànanao, raha tsy manozona anao manatrika izy! 6Ka hoy Iaveh tamin'i Satana: Indro atolotro eo an-tànanao izy; ny ainy tokana no hany tsimbino.
7Dia niala teo anatrehan'ny tavan'ny Tompo Satana, ka nasiany habokana ratsy Joba, hatrany am-paladiany ka hatrany an-tampon-dohany. 8Ary Joba naka tavim-bilany hihaorany ny feriny, sy nipetraka teo ambony lavenona. 9Dia hoy ny vavy taminy: Mbola maharitra amin'ny fahamarinanao ihany va hianao? Ozony Andriamanitra dia aoka ho faty hianao. 10Fa hoy izy taminy: Miteny toy ny vehivavy adala hianao! Mandray ny soa avy amin'Andriamanitra isika, ka nahoana no tsy handray ny ratsy avy aminy koa? Tamin'izany rehetra izany Joba tsy mba nanota tamin'ny molony.
11Nony nandre ny loza rehetra nanjo an'i Joba ireo sakaizany telo lahy: Elifaza avy any Temàna, Baldada avy any Sohe, ary Sofara avy any Naamà, dia samy niainga avy any amin'ny fonenany avy, ka niara-nidinika izay handehanana hitsapa alahelo sy hampionona azy. 12Mbola teny lavidavitra teny izy, dia nanopy ny masony fa tsy nahalala azy, ka nanandra-peo nitomany; samy nandrovitra ny kapaotiny izy ireo, nanipy vovoka mankany an-danitra ambonin'ny lohany. 13Dia niara-nipetraka tamin'ny tany teo akaikiny izy, fito andro sy fito alina tsy nisy niteny taminy, na dia indraim-bava aza, satria hitany fa mafy loatra ny fahoriany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0677 seconds